Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Denmark oo Maanta Maamul Cusub Dooratay.
Jaaliyada Denmark oo Maanta Maamul Cusub Dooratay.
Posted by ONA Admin	/ April 25, 2015
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 25/4/2015, lagu qabtay Xarunta Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Denmark shir balaadhan oo kusaabsanaa doorashada Maamulka Jaaliyada. Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay shacab wayne aad utiro badan oo ka kala yimid guud ahaan gobolada ay Jaaliyada Somalida Ogadenya faracyada kuleedahay.
Furitaankii shirka kabacdi waxaa khudbado koob koobban madasha shirka kasoo jeediyay qaar kamid ah madaxda iyo hawlwadeenada kala duwan ee kudhaqan wadanka Denmark. Khudbadahan ay madaxdu iyo masuuliintu soojeediyeen oo ahaa kuwo shacab waynihii kulankan kasoo qaybgalay ay kudiirsadeen aadna oogu riyaaqeen ayaa lagaga warbixiyay arimo badan oo halganka Somalida Ogadenya kusaabsan.
Sidoo kale waxaa warbixin meelo badan taabanaysa soo jeediyay Gudoomiyihii Jaaliyada Denmark ee wakhtigiisu dhamaaday Mudane Cumar Sheekh Maxamad. Wuxuu mudanuhu aad ooga waramay waxqabadkii Jaaliyada Somalida Ogadenya mudadii labada sano ahayd ee xilka uuhayay isaga iyo gudigiisii lashaqaynayay. Wuxuu Gudoomiyuhu umahadceliyay guud ahaan xubnaha Jaaliyada sidii wanaagsanayd eey midnimada iyo wada shaqaynta wadaniyadu ay ku dheehan tahay ay umuujiyeen intii uu xilka hayay.
Waxaa shirka maanta si kalsooni iyo ururnimo leh loogu doortay gudi cusub oo Jaaliyada maamuli doona haduu ilaahay yiraahdo labada sano ee soosocota. Waxaana Gudoomiye loodoortay Eng. Cabdiraxman Shariif (Shiino), Waxaa kaloo gudiga cusub kamid ah xubno ruug cadaa ah oo caan ka ah aadna ooga dhex muuqda Halganka Somalida Ogadenya. Gudigan cusub ee ladoortay ayaa lagu wadaa ineey wax badan kabadi doonaa waxqabadka iyo horumarinta hawlaha Jaaliyada isla markaana ay xoojin doonaa abaabulka iyo wacyigalinta bulshada Somalida Ogadenya ee kudhaqan wadanka Denmark.
Dhanka kale doorashadii Jaaliyada kabacdi waxaa laguda galay dood cilmiyeed ay xubnuhu iswaydaarsadeen taasoo lagaga dooday horumarinta iyo xoojinta hawlaha Halganka Gobanimo Doonka Somalida Ogadenya. Shirkan ayaa kusoo idlaaday jawi aad uwanaagsan taasoo si heersare ah looga yool gaadhay ajendihii iyo ujeedadii loosoo agaasimay. Doorashada maamulka cusub ee Jaaliyada ayaa udhacday si hufan oo cadalaad iyo sinaansho ay astaan utahay.